6 months, 4 weeks ago 1012 Qoodi
Albamni dhumaa Artiist Haacaaluu Hundeessaa 'Maal Mallisaa' barruu Biilboord maxxansa Onkololeessa 23, 2021 baaseen ramaddii "Albamii Muuziqaa filatamaa addunyaa - Best Global Music Album" jedhamutti badhaasa Giraamii bara 2022f kaadhimamaa ta'e dhiyaateera.
Barruun kun sagalee kennitoota badhaasa Giraamii addunyaa guutuutti argamaniif kan tamsa'u yoo ta'u, maxxansa kanaan Artistoota bebbeekame kan akka Direek, Liil Naas, Bilii Eliish fi kanneen biroo keessatti argamu.
'Maal Mallisaa'n albama 3ffaa fi isa dhumaa Artiist Haacaaluun hojjete yoo ta'u, maxxansa baay'ina kuma 500n maxxanfame kutaalee biyyatti garagaraatti tamsa'e heddumminaan gurgurameera. Karaa marsaalee intarneetaan gurguramuudhaanis sadarkaa addunyaa dursaa akka ture ni yaadatama.
Artiist Haacaaluu Hundeessaan sirboota isaa hawaasummaa fi siyaasa Oromoo ibsaniin hawaasa mara biratti jaalatamummaa fi kabaja guddaa kan argate yoo ta'u, Waxabajjii 29, 2020 magaalaa Finfinnee naannoo Kondominiyeemii Galaan jedhamutti halkan keessa naannoo 3:30tti rasaasa itti dhukaafameen ajjeefame.
Grammy Award 2022 Haacaaluu Hundeessaa Maal Mallisaa
June 25, 2021, 9:56 a.m.